PC oghere Grid Board / mpempe akwụkwọ Production Line - China Qingdao Xinquan Plastic
PC oghere Grid mpempe akwụkwọ Production Line
1. Ihe PC oghere Grid mpempe akwụkwọ Machine:
Nke a mmepụta akara a na-eji na-emepụta na PC oghere okporo mpempe akwụkwọ akara. PC okokụre mpempe akwụkwọ obosara 1220-2100mm, ọkpụrụkpụ: 2-25mm.
Model nke extruder PC SJ-120/36 SJ-45/30 PC SJ-100/36 SJ-45/30
Ike nke isi moto 185KW / 22KW 132KW / 18.5KW
Product obosara 1600-2100mm 1300-1600mm
Product ọkpụrụkpụ 2-25mm 2-20mm
3. Ngwa nke PC oghere Grid Ibé akwụkwọ
* PC oghere mpempe akwụkwọ na ọtụtụ-eji dị ka anyanwụ na-egosi uko ụlọ nke ụlọ ọrụ ụlọ, ulo, ahịa, n'ámá egwuregwu, ntụrụndụ center na ọha ụlọ ọrụ; weather ẹduọk nke n'ọdụ ụgbọ ala, okpomọkụ ụlọ, na paseji nke ezumike ulo; Nchekwa anyanwụ na-àmà uko ụlọ nke ọdụ na ụlọ, velarium nke modernized agriculture, anụ ụlọ ozuzu ụlọ ọrụ na ime ụlọ igwu ọdọ mmiri; mkpọtụ mgbochi elu ụzọ na elu okporo ụzọ na obodo, advertisement billboard, ọkụ igbe na ngosi mma; nkebi mgbidi n'agbata ụlọ ọrụ na ndụ ụlọ, na n'etiti ụlọ ịwụ na ụlọ mposi.
Previous: Ịkwanyere na WPC jikọrọ ọnụ Foamed Board Production Line
Next: Eyi oghere Grid Board Production Line
Board Ime Machine
Jikọrọ ọnụ ụfụfụ Board Production Line
Disposable Plastic efere Ime Machine
Foamed efere Production Line
Free ụfụfụ Board Production Line
Oghere Grid efere extrusion Line
Oghere Grid efere Ime Machine
Oghere Grid efere Production Line
Hot ere efere Production Line
License efere Production Line
Plastic efere Production Line
Pmma efere Production Line
Polystyrene ụfụfụ efere Production Line
Ps ụfụfụ Food efere Production Line
Ps ụfụfụ efere Production Line
Ịkwanyere Board extrusion Machine
ịkwanyere Board eme Machine
ịkwanyere jikọrọ ọnụ Foamed efere Production Line
ịkwanyere efere Production Line
friji efere Production Line
Xps ụfụfụ Board Production Line